पछिल्लो समय नेपालमा स्मार्टफोनको क्रेज बढ्दो क्रममा रहेको छ । अहिले धेरैको प्राथमिकतामा स्मार्टफोन पर्न थालेका छन् । यस्तोमा चाडबाड नजिकिँदै गर्दा स्मार्टफोनको बजारमा चपहपहल पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ । यस्तोमा स्मार्टफोन निर्माताहरुले पनि आफ्नो व्यापार विस्तारको लागि चाडबाडको समयमा महत्वपूर्ण अफरहरु ल्याइरहेका छन् । यस्तोमा यो दशैंका लागि भने केही नयाँ उच्च गुणस्तरका स्मार्टफोनहरु आएका छन् । उच्च गुणस्तरको स्मार्टफोन किन्न चाहनेहरुका लागि यो दशैंमा निम्न उत्पादनहरु महत्वपूर्ण बन्नसक्छ–
१. आईफोन एक्सएस, एक्सएस म्याक्स तथा एक्सआर :- केही समयअघि चर्चित स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी एप्पलले तीनवटा नयाँ आईफोन ल्याएको छ । ती नयाँ आईफोनहरुमा आईफोन एक्सएस, एक्सएस म्याक्स र एक्सआर रहेका छन् आईफोन एक्सआरको सुरु मूल्य नै ९१ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ  । यो एकदमै कम स्टोरेज क्षमताको हकमा तोकिएको मूल्य हो । त्यसैगरी एक्सएसको करिब १ लाख १४ हजार रुपैयाँ रहेको छ, जुन गत वर्षको आईफोन एक्सकै मूल्यबराबर हो भने एक्सएस म्याक्स ६४ जीबी मोडेललाई १ लाख २५ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ । आईफोन एक्सएस र एक्सएस म्याक्समध्ये एक्सएस ५.८ इन्चको छ भने म्याक्स ६.५ इन्चको रहेको छ । दुवैमा ओलेड एचडीआर स्क्रिन अर्थात् सुपर रेटिना डिस्प्ले रहेका छन् । यिनीहरु गोल्ड, सिल्भर र स्पेस ग्रे कलरमा उपलब्ध छन् । यिनीहरुमा १२ मेगापिक्सेल वाइड र टेलिफोटो लेन्सको डुअल क्यामरा रहेका छन् । त्यस्तै ७ मेगापिक्सेलको अगाडि क्यामरा रहेको छ, जसबाट पोट्रेट मोडमा समेत तस्बिर लिन सकिन्छ । यी दुवैको स्टोरेज तीन चरणमा छ, जुन ६४ जीबी, १२८ जीबी र ५१२ जीबी रहेका छन् । त्यसैगरी आईपी६८ वारट रेसिस्टेन्स रेटिंग रहेको छ । जसले २ मिटर गहिराइसम्म ३० मिनेटसम्म पानी छिर्न दिँदैन । ब्याट्री लाइफको कुरा गर्दा एक्सभन्दा एक्सएस ३० मिनेट बढीसम्म टिक्न सक्छ भने म्याक्स एक्सभन्दा डेढ घण्टा बढी समयसम्म टिक्न सक्छ । त्यस्तै अर्को महत्वपूर्ण विशेषता भनेको इ सिम प्रविधियुक्त डुअल सिम (दुई सिमयुक्त) भएको फोन हुन् यी दुवै भने फेस आईडीमार्फत अनलक गर्ने सुविधा रहेको छ । ३डी टर प्रेसर सेन्सिटिभ स्क्रिन रहेको स्टेरियो साउन्ड फोनमा रहेको छ । यी फोनमा आईओएस१२ सफ्टवेयर पनि रहेको छ ।
४. ओप्पो एफ ९ :- ओप्पो कम्पनीले आफ्नो लोकप्रिय एफ श्रृंखलाका नयाँ उत्पादन, ओप्पो एफ९ सार्वजनिक गरेको छ । मात्र ५ मिनेट चार्ज गर्दा २ घण्टाको टक टाइम दिने, भोक फ्ल्यास चार्जिङ र उद्योगकै पहिलो ग्राडियण्ट कलर डिजाइनसहितको फोन सार्वजनिक गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । सनराइज रेड, ट्वाइलाइट ब्ल्यू र स्टारी पर्पल गरी तीन भिन्न ग्राडियण्ट कलर कम्बिनेसनमा एफ९ उपलब्ध रहेको छ । ओप्पो एफ९ चार जीबीको मूल्य ४१ हजार पाँच सय ९० रुपैयाँ र छ जीबीको मूल्य ४५ हजार पाँच सय ९० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । उद्योगकै पहिलो ६.३ इञ्च ‘वाटरड्रप स्क्रिन’ डिजाइन, ९०.८ प्रतिशत स्क्रिन टू बडी रेसिया पृथक् ग्राडियण्ट कलर र तीन हजार पाँच सय एमएएच ब्याट्रीसहित ओप्पो एफ९ले उत्कृष्ट सेल्फीफंक्सनका साथै अन्य प्राविधिक पक्षमा समेत उपभोक्तालाई उत्कृष्ट अनुभव प्रदान गर्ने बताइएको छ । ओप्पो एफ९को भोक फ्ल्यास चार्जिङ क्षमतालाई विशेष प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिएको छ ।
२. सामसुङ ग्यालेक्सी एस९ प्लस :- सामसुङको स्मार्टफोन ग्यालेक्सी एस९ र एस९ प्लस गरी दुई नयाँ मोडल पनि नेपाली बजारमा आएको छ । ग्यालेक्सी एस९ मा ५ दशमलव ८ ईञ्च र एस९ प्लसमा ६ दशमलव २ ईञ्चको डिस्प्ले छ । अन्य फोनको तुलनामा यी दुई फोनमा निकै राम्रा विशेषता रहेको छ । दुवै फोनमा १० एनएमएन ६४ बिट अक्टाकोर प्रोसेसर दिइएको छ । फोन ६४ जीबी, १ सय २८ जीबी र २ सय ५६ जीबी गरी तीन प्रकारका स्टोरेज अप्सनमा उपलब्ध हुने बताइएको छ । इन्टरनल मेमोरी माइक्रो एसडी कार्डको माध्यमबाट ४ सय जीबीसम्म बढाउन सकिनेछ । दुवै फोन मिडनाइट ब्लयाक, टाइटानियम ग्रे, कोरल ब्लू र लिल्याक पर्पल कलरमा उपलब्ध रहेका छन् । त्यस्तै फोनको अगाडिपट्टि एफर १.७ अपर्चरसहितको ८ मेगापिक्सलको अटोफोकस क्यामरा राखिएको छ । ग्यालेक्सी एस९ को पछाडि अप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेसन (ओआईएस)सहित सुपर स्पीड ड्युअल पिक्सलयुक्त १२ मेगापिक्सलको अटो फोकस क्यामरा छ । एस९ प्लसको पछाडिपट्टि आईओएससहित सुपर स्पीड ड्युअल पिक्सल भएको १२–१२ मेगापिक्सलका २ ओटा क्यामरा छ । एस९ मा फोर जीबी -यामसहित ३ हजार एमएएच क्षमताको ब्याट्री छ । ग्यालेक्सी एस९ प्लसमा ६ जीबीको -यामसहित ३ हजार ५ सय एमएएचको ब्याट्री छ । एप्पलको आईफोनमा एनिमोजी फिचर भएझैं यी दुई फोनमा एआर इमोजी फिचर दिइएको छ ।
२. हुवावे नोभा ३ :- चिनियाँ फोन उत्पादक कम्पनी हुवावेले नोभा सिरिजअन्तर्गतका पछिल्ला स्मार्टफोनहरू (नोभा थ्री तथा नोभा थ्री आई नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । मानव जीवनलाई पूर्ण सहज बनाउने गरी बनाइएको आकर्षक डिजाइनका यी स्मार्टफोनहरूमा एउटा अल क्वाड क्यामरा तथा शक्तिशाली प्रणाली(एसओसी जडान गरिएको छ । हुुवावे नोभा थ्री तथा हुवावे नोभा थ्री आई दुवैमा दुईवटा फ्रन्ट क्यामराहरू,२४ एमपी प्राइमरी क्यामरा तथा २ एमपीको सेकेण्डरी क्यामरा जडित छ । प्राइमरी क्यामराले फोटो तथा भिडियोहरू एकदम स्पष्ट हुनेगरी खिच्न सक्छ भने सेकेण्डरी क्यामराले गहिराईका साथ खिच्छ । क्यामरामा भएका दुईवटा सेन्सरहरूले साँच्चै नै उत्कृष्ट फोटोहरू खिच्नसक्छ । सेल्फी खिच्ने मजालाई बढाउन हुवावे नोभा थ्री तथा हुवावे नोभा थ्री आई दुवैले दृश्य चिन्ने क्षमता पनि रहेको छ । हुवावे नोभा थ्रीमा २४ एमपीको मोनोक्रम तथा दुईवटा एफर१.८ वाइड एपेर्चर ६पी लेन्सहरूसहितको १६ एमपी आरजीबी सेन्सर जडान गरिएको छ । यो विशेषताले अँध्यारो वा कम उज्यालो ठाउँमा राम्रो तस्वीहरहरू खिच्न मात्र होइन ती तस्वीरहरूमाथि धेरै नियन्त्रण पनि दिन गर्दछ । हुवावे नोभा थ्री आईमा शक्तिशाला रियर क्यामराहरू पनि रहेको छ । रियर क्यामरामा १६ एमपीको प्राइमरी सेन्सर तथा २ एमपीको सेकेण्डरी सेन्सर पनि छ । उत्कृष्ट डिजाइन तथा आकर्षक रंग विकल्पहरूले हुवावेलाई फेसनएबल बनाएको छ । अघिल्ला संस्करणका स्मार्टफोनहरूभन्दा यी स्मार्टफोनहरूको आकर्षक र पातलो पनि छ। दुवै फोनहरू आकर्षक रंगहरूमा उपलब्ध छन् । हुवावे नोभा थ्री तथा हुवावे नोभा थ्री आई दुवै यस वर्षको चर्चित रंग प्रयोग भएको छ । आइरिस ब्लूू, हुवावेका दुवै फोनहरू ग्लास प्यानलले ढाकिएको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)